RASMI: Kulamada Horyaalka Premier League Ee Isbeddel Lagu Sameeyey & Waqtiga La Ciyaarayo - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaRASMI: Kulamada Horyaalka Premier League Ee Isbeddel Lagu Sameeyey & Waqtiga La Ciyaarayo
RASMI: Kulamada Horyaalka Premier League Ee Isbeddel Lagu Sameeyey & Waqtiga La Ciyaarayo
April 30, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Maamulka horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ayaa shaaciyey isbeddel lagu sameeyey 20ka kulan ee ugu dambeeya xilli ciyaareedkan, kuwaas oo loo ogolaanayo in taageereyaashu ay soo galaan garoomada.
Si waafaqsan habraaca dawladda u dejisay xakamaynta fayraska Korona, waxa Premier League uu qorsheeyey in xilli ciyaareedka lagu soo xidho taageereyaal garoomada jooga, waxaana kulamada ugu dambeeya lagu beegay waqtiga dawladdu khafiifinayso xayiraadaha xakamaynta xanuunka.
Badhtamaha bishan May ayay dawladdu fududayn doontaa xayiraadaha, waxaana la ogolaan doonaa in garoomada ay yimaaddaan illaa 10,000 qof amaba afar meeloodow hal meel mugga qaadka garoonka, waxaanay taasi keentay kulamadii kasoo horreyn lahaa waqtigaas dib loogu beego waqtiga ay dawladdu fasaxday jamaahiirta.
Dawladda oo sidoo kale ogolaanaysa in 500 qof oo taageereyaal ah ay koox waliba dibedda u kaxaysan karto kulamada 37aad iyo 38aad ee xilli ciyaareedkan lagu soo xidhayo, sida uu shaaciyey Premier League, waxa ciyaarahaas lagu beegay waqtiga la qaadayo xayiraadaha mamnuucaya isku imaatinka dadka.
Kulamada 37aad ayaa la ciyaari doonaa May 19/19, halka kulamada lagu soo xidhayo xilli ciyaareedka ee 38aad dhamaantood ay isku waqti soo wada dhici doonaan, waxaana la ciyaari doonaa May 23.
Waqtiga ama saacadda ay kulamadani dhacayaan ayay telefishannadu go’aamin doonaan, hase yeeshee waxa hadda lasii go’aamiyey taariikhda ciyaarahan.
Akhriso kulamada isbeddelka lagu sameeyey:
Kulamada usbuuca 37aad – May 18/19
Newcastle v Sheffield Utd
Kulamada usbuuca 38aad – May 23